Abarhwebi abaKhulu xa kuthelekiswa nabathengisi ababi
Ngaba ndim ndedwa osakuthanda ukuthengisa okuYilayo?
NgoLwesihlanu, Julayi 2, 2010 NgeCawa, uJuni 21, 2015 Douglas Karr
Ndandiqhuba eWest Side yedolophu, ndajonga ngapha kwibhodi yezaziso, kwaye kukho ibhodi yezaziso yezixhobo. Endaweni yokuba ibhilibhodi ibeyintengiso eqhelekileyo, isibhengezo siye yonke indlela emhlabeni. Ingalo ibaleke eposini kwaye esona sixhobo besikwibhodi yezaziso. Kwakubonakala ngathi ingalo yayiza kanye emhlabeni. Ukuba bendidinga isando, bendiya kukhumbula uphawu kwaye mhlawumbi bendiya kuthenga.
Kwi-Intanethi, ndiyakuvuyela ukufumana intengiso efanelekileyo xa ndikhangela. Ngokwenyani ndinokholo ngakumbi kumthengisi owenza uphando oluphambili ngamagama aphambili, andilandele, kwaye andibonise ngentengiso efanelekileyo kunokuba kunjalo kuGoogle endinika iziphumo ezifanelekileyo.
Ndiyathanda ukunika abathengisi iitoni zolwazi lomntu siqu. Ndiyenzela ukuba bandiqonde ngcono kwaye bandinike intengiso ehambelana nobume bam. Ndifuna izibhengezo zentengiso. Ndifuna amacebo okuthengisa akrelekrele. Ndisayithanda intengiso yokuyila okanye iphulo lokwazisa elikwazi ukundigxotha, lifake ingqalelo yam, kwaye lenze ukuba ndibeke umnwe wam kuloo mpuku.
Ndim ndedwa na? Ndithengela phantse yonke into ekwi-intanethi ngoku. Ukuba andizange ndindwendwele enye ivenkile ebomini bam, ngekhe. Xa ndibona intengiso kwaye ndikulungele ukuthenga, ndiyayihlasela. Ndiyakuthanda ukuthengisa kwaye ndiyakuthanda intengiso.
Ndiyakholelwa ukuba ukuthengisa kunye nentengiso zifumana i-rap embi ngenxa yabathengisi abangamavila. Endaweni yokubeka esichengeni ubuchule bokuyila okanye ukwenza umsebenzi okongezelekileyo wokuziqhelanisa nokuzenzela kunye nokujolisa, bavele batyhalele ubukrelekrele babo phambi kwamehlo amaninzi kangangoko banako.
Abathengisi abaphambili bayakwazi ukubona ukuba usinga kweliphi icala kwaye, ukuba usiya kweliphi icala, bakukhokelela kanye. Kufana nokuloba iimpukane… intlanzi ilambile kwaye isirhintyelo sihlala sivela sibajikeleza sijikeleza. ide ibe kumgama wokuluma. Abathengisi aboyikekayo baphosa nje umnatha. Awunakho ukufumana izikhokelo ezaneleyo? Umnatha omkhulu! Ngaba awukwazi? Iminatha emininzi! Batsala iintlanzi zabo ngelixa besokola kwaye bekhefuzela ukuba babaleke.
Kunjani ngawe? Ngaba usayixabisa intengiso enkulu kunye nentengiso?
tags: Billboardintengiso yebhodi yebhodiyophando ngegama elingundoqontengiso kwi intanethiyokulandelela
IWordPress: Uyenza njani iVidiyo ye-Facebox popup
Jul 2, 2010 ngo-7: 38 AM
Yeyona ntengiso intle kunye noyilo endiyikhumbulayo. Ndidla ngokulungisa yonke into eseleyo kuba iye yaqaqamba.
Jul 2, 2010 ngo-7: 48 AM
Ungatsho ngokunyanisekileyo ukuba andiyixabisi intengiso enkulu, nokuba ijolise kangakanani. Ngapha koko, okukhona umthengisi ezama ukujolisa kum, kokukhona ndifumana ukubuyela umva. Amava ayo afanayo ngokusebenzisa iimveliso ezininzi zeMicrosoft: bazama nzima ukuqikelela into endiyifunayo (jonga, ukuzenzela ngokuzenzekelayo!), Kodwa abayenzi kakuhle loo nto.
Kukwanjalo nakwintengiso yebrand ethi endaweni yokuzama ukukhuthaza ukuthengisa ngokuthe ngqo, izame ukwenza imeko ehambelana nophawu. Eyona nto ingasebenziyo, eyona nto iyikhohlisayo.
Kum, abathengisi benza umonakalo ongaphezulu kwi-brand yabo xa bethengisa. Ndivakalelwa ngathi bazama ukukhohlisa kancinane. Kwaye ezantsi, ndicinga ukuba uninzi lwabantu luziva ngokufanayo. Bathenga iimveliso zentengiso ngokukrokra, kodwa bakhetha ukuthenga kwiimpawu ezinyanisekileyo nezisekuhleni xa kukho ezinye iindlela.
Ndicinga ukuba kunzima kwishishini lezentengiso ukuba lamkele, kodwa ngeendlela ezininzi kunye neetekhnoloji ngoku ezinikezele ekukhonzeni iintengiso, ixabiso lazo zonke iintengiso liyehla; nkqu nezo “zilungileyo”.
Jul 2, 2010 ngo-8: 12 AM
I-Deckerton, ngumbono omkhulu! Ndinomdla, nangona kunjalo, kungakanani ukuthengisa kunye nentengiso oyingqinayo ungakhange wazi nokuba unxibelelana ngobuqhetseba!
Jul 2, 2010 ngo-12: 43 PM
Ndikunye nawe, Doug! Ndiyayixabisa xa iintengiso zihambelana nezinto endizithandayo kwaye ndithathe ingqalelo yam ngeendlela zokuyila. Inyani yile, ndiyazithenga izinto… kwaye intengiso elungileyo yenza ukuba kube lula kum ukunxibelelana neemveliso ezifanelekileyo kum.